राजेन्द्र महतो संसदीय चुनावमा विमलेन्द्रसँग भिड्ने, राजपा नेताहरु को कहाँबाट लड्दै ? - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 National राजनीति राजेन्द्र महतो संसदीय चुनावमा विमलेन्द्रसँग भिड्ने, राजपा नेताहरु को कहाँबाट लड्दै ?
राजेन्द्र महतो संसदीय चुनावमा विमलेन्द्रसँग भिड्ने, राजपा नेताहरु को कहाँबाट लड्दै ?
Marganugamidaily प्रकाशित समय 7:19:00 PM
काठमाडौं, १० असोज । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल जनकपुर उपमहानगरपालिकामा भारी मतले विजय गरेपछि सो पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले सोही क्षेत्रबाट संसदको चुनाव लड्ने भएका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व गृहमन्त्री तथा काँग्र्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको साथमा चुनाव लड्ने भएका हुन् । राजपा नेपालको तर्फबाट लालकिशोर साह जितेको जनकपुर उपमहानगरपालिका तीनवटा क्षेत्रमा बाँडिएका छन् । केही भाग तीन नम्बरमा गएका छन् भने केही भाग दुई र चार पनि गएका छन् । त्यसमध्ये अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महतोले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तीनबाट लड्ने सोच बनाएको स्रोतहरु बताउँछन् । यो क्षेत्रबाट काँग्रेसका नेता निधिले चुनाव जित्दै आएका छन् । राजपा नेपालका एक नेताले भने, ‘तीन नम्बर क्षेत्रमा विमलेन्द्र निधिलाई टक्कर दिने खालका कोही नेता नभएको कारण राजेन्द्र महतोलाई ल्याएर चुनाव लडाउने तयारी भइरहेको छ । तीन नम्बरमा जनकपुरका केही भाग मिसिएका छन् । साहु माहाजनको बर्चस्व रहेको ठाउँमा त्यसकै मत तान्नका लागि अध्यक्ष महतोलाई त्यहाँबाट उठाउन खोजेको बताइन्छ ।’
यसअघि साहु महाजनको मत लिएर सञ्जय साह (टकला) क्षेत्र नं. ४ बाट जित्दै आएका थिए । अब त्यही क्षेत्रबाट महतो लड्ने सोंच बनाएका छन् । अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो सर्लाहीका हुन् । सर्लाहीमा तीनजना नेता रहेका छन् । यसअघि महेन्द्रराय यादव र राजेन्द्र महतो एउटै क्षेत्रबाट चुनाव लडेका थिए, जहाँ राजेन्द्र महतो पराजित भएका थिए । अब फेरि पनि दुई जना यसरी नजुधुन् भन्ने उद्देश्यले पनि महतोलाई जनकपुर सार्न लागेको स्रोतको दावी छ ।
महेन्द्र राय यादवलाई सर्लाहीबाट लडाउने राजपाको तयारी छ । महन्थ ठाकुरलाई यसपटक चुनाव नलडाउने र उनलाई समानुपातिकमा राख्ने राजपाको तयारी रहेको छ । शरतसिंह भण्डारी महोत्तरीबाट, राजकिशोर यादव सिरहाबाट, अनिल झा रौतहटबाट चुनाव लड्ने राजपा नेपाल स्रोतले जनाएको छ ।
राजपा नेपाल धनुषा संयोजक संजय सिंहले भने, ‘अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो जनकपुरबाट चुनाव लडदिनुभयो भने हाम्रो लागि सौभाग्य हुनेछ ।’ ‘मधेश प्रदेशको राजधानी बन्न लागेको जनकपुरबाट राजपा नेपालका एकजना अध्यक्ष मण्डल चुनाव लड्दा राम्रो हुने कुरा जनमानसबाट नै आएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले केन्द्रीय स्तरमा यस विषयमा कुरा गरेको छैन, अब औपचारिक रुपमा आग्रह नै गर्छौं ।’
यस विषयमा अध्यक्ष महतोसँग पटक पटक सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आएनन् ।